ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: “အပေါင်းလက္ခဏာတွေ အများကြီးတွေ့ပါတယ်”
ကိုမင်းကိုနိုင် ဦးဆောင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း အပါအ၀င် လွှတ် တော် ရေးရာ ဥက္ကဌ တွေနဲ့ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်တာဝါမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အ ထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်(ရန်ကုန်- ရုံးခွဲ)မှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြ ကာလ အတွင်း က တခြားသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တွေ့ရသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်
အဲဒီ ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် လင်းသန့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် အများစုဟာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရာမှ သမ္မတ ဦးသိန်း စိန် ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ မကြာသေးခင်က လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းလာစေရေး ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။
မေး။ ။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အပါအ၀င် လွှတ် တော် ရေးရာ ဥက္ကဌ တွေ နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာတွေ အဓိကထား ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါလဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင်။ ။ အဓိကကတော့ဗျာ သူတို့ လွှတ်တော်ဆိုတာက ဥပဒေပြုတဲ့ကိစ္စက မူလတာဝန်ခံပဲ။ တခုတော့ ရှိတယ်ဗျ။ နိုင်ငံမှာတော့ အာဏာ အမြင့်ဆုံးနေရာပဲ။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ သမ္မတကိုတောင်မှ လွှတ်တော်ကနေ ရွေးရတာကိုးဗျ။ ဒီတော့ အစိုးရအဖွဲ့ပြီးသွားရင် လွှတ်တော်ရဲ့ကိစ္စက ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက် ပေးနိုင်မယ့် ဥပဒေတွေ ပြ ဌာန်း ဖို့ရယ်၊ ပြည်သူတွေအတွက် မလိုဘဲ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေတဲ့၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့ ဥပဒေဆိုးတွေကို အကုန်ဖျက်သိမ်းဖို့ရယ်၊ ဒီ ၂ ခုပါပဲ။ အဲဒီ ၂ ခုကိုပဲ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးကြတာ။ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးမှုတွေက အဲဒီအထဲက ပြေး မလွတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ ဘာကြောင့် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ဆွေးနွေးမှုအပေါ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမြင်လည်း သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ လိုရင်းပြောရင်တော့ အပေါင်းလက္ခဏာတွေ အများကြီးတွေ့ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ အရပ်ဘက်ကိုပြောင်း လဲ လာပြီးတော့ အရပ်သားများအနေနဲ့ ကြိုးစားကြတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အရင်က ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အမိန့်နာခံမှုနဲ့ ခိုင်းမှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ယနေ့အထိ ရှိတယ်၊ ကျန်နေတယ်ဆိုတာလည်း နားလည်ကြပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့လူတွေဟာ တကယ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိနေ ဖို့ပဲ။ ကျနော်မြင်တာကတော့ မနေ့က ကျနော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတော့ သူတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ချင်စိတ် တကယ်ရှိပြီး ကြိုးစားနေတယ်လို့တော့ ယူဆလို့ ရတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောထားပြီးသား ရှိတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင် ဘယ်အင်အားစုနဲ့မဆို ကျနော်တို့ လက်တွဲမယ်ဆိုတာ၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့မနေ့က တွေ့ဆုံဖြစ်ကြတာပါ။
မေး။ ။ အခုလို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အပါအ၀င် လွှတ်တော်ရေးရာ ဥက္ကဌ တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတော့ လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေမှာ အစီအစဉ် ရှိလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲတခုတည်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတဲ့လူတွေတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ တဘက်ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံ တကာမှာ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြီးလို့ နိုင်မယ် ဆိုပါတော့၊ ပြီးတော့ ရော ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်လို့ အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ ဇင်ဘာဗွေ နိုင်ငံ လိုမျိုး ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ အဲဒါဆိုရင် သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ၁၉၉၀ ကို ပြန်ကြည့်ဗျာ။ အဲဒီတော့ တကယ်တမ်းက Instituion ခေါ်တဲ့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ မခိုင်မာဘဲနဲ့ အားမကောင်းဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ရွေးကောက်ပွဲ နည်းလမ်းတခုတည်းနဲ့ ကူးပြောင်းတဲ့ အစဉ်အလာကို ကျနော် တို့က မစဉ်းစားဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာက အတော်များများစဉ်းစားကြပြီး အဲဒါကို အာရုံစိုက်ကြတာများပါတယ်။ ကျနော် တို့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲက ရတဲ့ ရလဒ်ကို ပြန်ဖော်ဖို့အတွက် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း အားကောင်းနေဖို့၊ အရပ်သား တွေ၊ ဒီမိုကရက်တစ်တွေ အားကောင်းနေဖို့ ကျနော်တို့ ပိုပြီး အာရုံ စိုက်တယ်။
မေး။ ။ ဒီတော့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ဘာတွေကို ဘယ်လို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးပြောဆို ခဲ့ပါသေးလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး တွေ့ခဲ့သမျှတွေမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ နစ်နာတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ချင်တာ အကုန်လုံးကို မနေ့က တွေ့ဆုံမှုမှာ ကျနော်တို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အပါအ၀င် ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌ တွေ အကုန်လုံး ကို ပြန်ပြီးတော့ သယ်ဆောင်ပြီး အရောက်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို ခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ အသစ်ရေးဆွဲမယ့် ဥပဒေတွေ၊ ဥပမာ တခုပြောပါ့မယ်၊ အများအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဥပဒေတခုကို ပြဌာန်းလိုက်ပြီ၊ ပြဌာန်း လိုက်ပေမယ့် လက်တွေ့ကျတော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ နည်းဥပဒေ မထွက်သေးဘူး။ အဲဒီအခါကျတော့ အလုပ်လုပ်လို့ မရဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားဘက်ကလူတွေက ဒါကို အကြောင်းပြပြီးတော့ အပြောင်းအလဲကို တကယ်မလုပ်ကြဘူး။ နဂိုကတည်းက မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေ ပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာ ခေါက်ရိုးကျိုးတွေကြားထဲမှာ ခုနကလို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိလို့ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေ၊ နည်းဥပဒေ မရှိသေးလို့ဆိုတဲ့ဆင်ခြေတွေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ အကောင်းဘက်ပြောင်းလဲမှုကို မခံစားရဘူးပေါ့ဗျာ။ အဟောင်းအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ ပြဿနာတွေကို ကျနော်တို့ တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာလည်း ကျနော် တို့ ဖြစ်စေချင်တာ ဥပဒေ တခု ထုတ်ပြန်ပြီးရင် နောက်ထပ်ပြီး လိုက်လာပြီးတော့ နည်းဥပဒေကို ကာလ အကန့်အသတ် ဘယ်လောက်အတွင်းမှာ ဘယ်နှရက် အတွင်းမှာ အပြီးအပြတ် ရအောင်ထွက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကို အခုလာမယ့် လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေ တရပ်အနေနဲ့ကို ပြဌာန်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကိုယ်စားပေါ့ဗျာ ကျနော်တို့ အဓိက အလေးထားပြီး ပြောပြခဲ့ တယ်။ ကျန်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း တော်တော်များပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ)
မေး။ ။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဘက်က ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုကိုရော သူရ ဦးရွှေမန်းအပါအ၀င် လွှတ်တော် တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က ဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့လဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ပြောတာအကုန်လုံးကို သူတို့သဘောတူပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တကယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့ကြုံ တွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲ အခြေအနေတွေကိုလည်း သူတို့ ရိုးရိုးသားသား ကျနော်တို့ကို ပြောပြပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် အရင်အဟောင်းထဲက ဟာတွေက မလိုက်ပါနိုင်မှုတွေရော ပြီးတော့ အခုမှ၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း တသက် လုံးမှာ စစ်တပ်ထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး အမိန့်ပေးတဲ့စနစ်ကိုပဲ ကျင်လည်လာတာဆိုတော့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ မှာ ကျင့်သားမရသေးတာတွေကို ရိုးရိုးသားသား ကျနော်တို့ကို ပြောပြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာလှည့်လာပြီးတော့ အတွေ့အကြုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ အများကြီး သူတို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုနေသေးတယ်ဆိုတာကို ပြောပါတယ်။ တကယ်လည်း သိပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြင်တာက အဲဒီလို ရိုးရိုးသားသား အမှန်အတိုင်းပြောတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ကျနော်တို့ သဘောကျတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အနာ သိဖို့လည်း လိုတာကိုးဗျ။ အနာသိမှ ဆေး ကုလို့ ရမှာ။ သူတို့ ဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျနော်တို့ သိခွင့်ရတယ်။ နောက်တခါ လူထုကြားထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲ ကိုလည်း သူတို့ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ အနာတွေကို အမှန်အတိုင်းပြောကြတယ်။ ပြီးတော့ သဘာဝကျတဲ့ နည်းလမ်းကို တကယ်ပဲ ရွေးကြရမှာကိုး။ အနာကို၊ အားနည်းချက်ကို ဒီအတိုင်း၂ ဘက်လုံးပြောနိုင်ကြတာကတော့ အကျိုးရှိပါတယ်၊ ဆက်ပြီးတော့ ကုထုံးတွေလည်း ကျနော်တို့ စဉ်း စားကြပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုပါတော့ဗျာ။ တကယ် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာသည်တွေကို အကူအညီတွေ ကျွမ်းကျင်သူတွေခေါ်ပြီးတော့ နောက်ထပ် ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းတာမျိုးပေါ့ ဗျာ။ သူတို့မှာ ရှေ့ဆက်ပြီး တော့ အစီအစဉ်တွေ အများကြီး စဉ်းစားထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းတွေလည်း ကျနော်တို့ကို ပြန်ပြီးတော့ ရှင်းပြတယ်။
မေး။ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ထဲ ၀င်ရောက် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာမျိုးရော ရှိလား။
ဖြေ။ ။ အထူးတလည် တခုတ်တရ ကျနော်တို့ကို ဖိတ်တာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလုံး နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ လွှတ် တော်ထဲ ၀င်ပြီး လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာပဲဗျာ။ ဒါကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်ခွင့်ပဲပေါ့။ လောလောဆယ်ကတော့ ကျနော်တို့ လတ်တလော အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းအောင် လုပ်နေတယ်။ အရပ်ဘက် လူ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင်က သူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်ခံတယ်။ အဲဒါ ကျနော် တို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်တချက်လည်းဖြစ်တယ်။ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းအောင်၊ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်း အရပ်သားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက မြင့်မားအောင် ဒါပဲ ကျနော်တို့ အာရုံစိုက်မယ်ဗျာ။
မေး။ ။ နောက် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးလည်း ဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်ဆို။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ အဲဒါ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လက်တွေ့မှာ သမ္မတက စကားစပ်ရင် စပ်သလို ပြန်လာလို့ရရင် ပြန်လာပါလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါက ကျနော်တို့ဆိုလိုတာက အမိန့်ဒီဂရီ တရပ်ကို သပ်သပ်မှတ်မှတ် ကြေညာပေးတာမျိုးကို ကျနော်တို့ လိုချင်တာကိုး။ လက်တွေ့မှာကျတော့ တယောက်ချင်း သံရုံးသွားပြီး ခွင့်ပန်ရတယ်။ သံရုံးက ခွင့်ပြုတဲ့ လူက တော့ ပြန်လာလို့ရပြီး ခွင့်မပြုတဲ့လူက ပြန်မလာဘူး။ ဘယ်စံဘယ်နှုန်းတွေနဲ့ ခွင့်ပြုမယ်၊ ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာ မသိရဘူး။ အဲဒါကြီး က အရင် အဟောင်းကြီးဗျ။ တယ်မနိပ်ဘူး။ လက်တွေ့မှာ အလုပ် မဖြစ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အားလုံး ပြန်လာနိုင်ဖို့ကို အမိန့်ဒီဂရီတရပ် ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ကျနော်တို့က အဲဒီကိစ္စတင် မကဘူးဗျ။ လက်ကျန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကိစ္စ ကိုပါ အထူးအလေးထားပြီး ထိပ်ဆုံးကနေပြီး ပြောတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အင်အားတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံရေး လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ကြရင်းနဲ့ အမှုအမျိုးမျိုးတပ်ပြီးတော့ အဖမ်းဆီး ခံနေရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေပေါ့။ သူတို့ရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ အင်အားတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ အင်အားတွေကို အသုံးချဖို့၊ ဒီ အင် အားတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး သူတို့ လိုလားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆက်ပြီးတော့ သူတို့က ကျနော်တို့ ပြောဆိုခဲ့တာတွေကို အလေးအနက်ထားပြီး ဆောင်ရွက် ပါလိမ့်မယ်။
အလားအလာကောင်းတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကျနော်တို့ တတ်စွမ်းသမျှ၊ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားပြီး တင်ပြခဲ့တာပါ။ စာရင်းဇယားတွေလည်းပြုစုတဲ့သူက ပြုစုနေကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာတော့ ကျနော်တို့သိသလောက် လူမကျန်ရအောင် ကြိုး စားပြီးတော့ လုပ်နေပါတယ်။ ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:24 AM
Labels: News, သတင်း
လွှတ်တော်တွင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက် အန်အယ်လ်ဒီ ကော်မတီဖွ...
ဥရောပခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင...
လစ်လပ် ဒုတိယသမ္မတနေရာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အထွေထွေအတွင်းေ...
သူယုတ်မာဒေဝဒတ်အလောင်း ရွဲကုန်သည်လို အော်ဟစ်ဆဲဆိုကြ...
Genuine Discussons with U Shwe Man? တကဲ. ဆွေးနွေးပ...
NLD လူငယ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြန်မာပြည်တွင်း ပါတီအဖ...